Ọ bụ gọọmentị, a ga-ewepụta Samsung Galaxy Note 7 na August 2 | Gam akporosis
Samsung kwadoro ya, na August 2 bụ ngosi nke Samsung Galaxy Note 7
The smartphone, ma ọ bụ phablet, nke ahụ nwere ike ịbụ nnukwu mgbanwe ebe ọ bụ na ọ malitere ya, Samsung Galaxy Note 7, site n'eziokwu na ọ pụtara na ọ ga-ebu ihu ihu ihu abụọ na ga-eme ka ndị ọzọ sensations banyere ihe ọkọlọtọ format ka anyị na-agba nkịtị, ọ na-ama nwere ya ukara ụbọchị dị ka anyị na-ama. Mana ọ bụ oge a Samsung n'onwe ya gosipụtara ya na 7 2016 wepu ya.
Site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ya, ụlọ ọrụ Korea ekwupụtala, a ga-eme ihe omume 7 2016 Unpacked na August 2. Yabụ ugbu a enwere ike ịsị na anyị tụgharịrị Cheta 7 mgbe nnukwu ọkwa ahụ dị na 5. Ekwentị nke, dịka m kwuru, ga-apụta maka ịnwe otu ụdị na ihu ihu na ọ ga - eme nnukwu mgbanwe nke ndị ọzọ ọnụ, ma e wezụga ndị malitere na elu-ọgwụgwụ site Samsung onwe ya.
Site na Samsung Galaxy Note 7 anyị nwere a dịgasị iche iche nke ntapu mmiri ya na ihe ndi ozo nwere ike ime na onu ahia, nke amara ga-abụ ihe ruru € 849. Ọnụ nke ga-eme ka ihe niile mara site na onye nrụpụta a ruo na njedebe nke ga-apụta na ihuenyo ihu ahụ nke ga-enwe ike ịlele tupu na mgbe maka ụzọ anyị siri mee. Kedu ihe bụ nnwale na nsụgharị abụọ e nyere na Samsung abụọ, ghọrọ mmalite.
Ihe ngosi nke Samsung Galaxy Note Unpacked ga-abụ na 16: 00 pm na London, ma na Spain anyị ga-abịa n ’elekere 17:00 nke ụtụtụ., yabụ na ị nwere ike ịka akara ya na kalenda gị ka ị bụrụ ndị na-ekiri ihe nkiri na-aga n'ihu nke mmemme nke Samsung ga-enye. A ọnụ na a mma QHD ihuenyo, a ọhụrụ Exynos processor na na, dị ka mgbe niile, ga-enwe S Pen dị ka onye ọzọ nke ya kasị ukwuu atụmatụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Samsung kwadoro ya, na August 2 bụ ngosi nke Samsung Galaxy Note 7
Anyị kwesịrị karịa egwuregwu vidio dị ka Pokémon GO
[APK] N’ikpeazụ Hangouts na-agbakwunye nkwado maka ozi vidiyo na ụdị ọhụrụ